Abavelisi belaphu leZebra kunye nababoneleli - iChina iZebra Fabric Factory
Ilaphu elingaboniyo leVerman yimveliso ephuculweyo yelaphu elingaboniyo le-Shangri-La, elidibanisa isikrini selaphu, isikrini sefestile kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yomthunzi kunye nokuhlobisa kwekhethini, okwenza kube yinto efanelekileyo yokugcina ubumfihlo kunye nokulawula ukukhanya. Ilaphu elingaboniyo leGroupveve linokukuzisela imvakalelo yokusondela ngokungenasiphelo kwindalo, uphumle kwaye wonwabile, unokukuzisela imvakalelo yokuzola nokuba separadesi.
Ilaphu lisebenzisa iintambo ezikhethekileyo kwaye lifumana unyango lokumisela ubushushu obuphezulu, oluhlala luhleli kwaye alusuki. Izinto eziphathekayo ze-verman blinds fabric yi-100% i-polyester. Sinikezela ngeesampulu zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngokuthe ngqo phambi komyalelo. Ngaphezu koko, amalaphu ethu anombala otyebileyo kwaye alandela indlela yefashoni yehlabathi.
2020 Isimbo esitsha seVerman Blinds Fabric 3m Width For Office
Ilaphu elimfama leVerman yimveliso ephuculweyo yelaphu elingaboniyo leShangri-La. Ayigcini nje kuphela impembelelo emdaka yesigqubuthelo selaphu elingaboniyo le-Shangri-La, kodwa inesitayile esilula sefashoni yeemfama zeVenice. Uyilo lwewebhu oluvulekileyo lwelaphu le-verman eliyimfama lulungele ukususwa kothuli lwemihla ngemihla, ukuhla kunye nomnye umsebenzi wokucoca. Ilaphu elingaboniyo likaGroeve Verman lolona khetho lufanelekileyo kwiprojekthi yakho yokumfamekisa yasekhaya. Ilaphu lisebenzisa iintambo ezikhethekileyo kwaye lifumana unyango lokumisela ubushushu obuphezulu, oluhlala luhleli kwaye alusuki.
Ukugcinwa kunye nokucocwa kwelaphu le-Groupeve zebra blinds kuloluhlobo lungezantsi:
1. Ukufunxa ivacuum kunye nokususwa kothuli.
2. Sebenzisa ilaphu elithambileyo okanye isiponji esimanziswe ngamanzi ashushu ukosula ikhethini ngexesha lokususa uthuli / ukuvala inzala. Ukuba kuyimfuneko, iisepha ezithambileyo zingongezwa. Sula ngobunono ukuthintela ukushwabana okanye ukonakalisa ilaphu. Ukosula kunokwenza umkhusane ucoceke.
3. Sebenzisa iayini yomphunga ukutshiza kwindawo emalunga ne-10 cm kude nomkhusane welaphu, onokuthi ube nefuthe lokususa uthuli / ukuvala inzala.
Ilaphu elingaboniyo le-Silhouette yimveliso ephuculweyo ye-Shangri-La eyimfama eyilaphu, kukhetho lokugcina ubumfihlo kunye nokulawula ukukhanya. I-blade ixhonywe phakathi kweeleya ezimbini zezikrini. Xa imfama ivuliwe, indawo ebukekayo inokubonwa ngezikrini, kwaye ukukhanya okungena kwigumbi nako kuyahluzwa ukuze kuthambe; xa imfama ivaliwe, unokuqinisekisa ubumfihlo bakho ngelixa uqaqambisa ubume obuthambileyo beShangri-La blind.
Ngelizwi, ilaphu lethu elimfamekisayo le-silhouette lolona khetho lufanelekileyo kwiifektri ezimfamekisayo okanye kubathengisi bevenkile. Sinokunikezela ngeesampulu zasimahla zelaphu le-silhouette blinds kubathengi bethu. Kwaye umqulu ngamnye welaphu le-rainbow blinds kufuneka uphumelele uvavanyo lomgangatho ngaphambi kokuthunyelwa.
I-Ladder ehlala iTape ye-Shangri-La Blinds Fabric 100% Blackout
Ilaphu le-Ladder i-shangri-la blinds blinds yimveliso ephuculweyo yelaphu elingaboniyo le-Shangri-La. Ayigcini nje kuphela impembelelo emdaka yesigqubuthelo selaphu elingaboniyo le-Shangri-La, kodwa inesitayile esilula sefashoni yeemfama zeVenice. Ilaphu le-Groeve Ladder le-shangri-la blinds linokukuzisela imvakalelo yokusondela ngokungenasiphelo kwindalo, ukuphumla kunye nokonwaba, kwakhona kunokukuzisela imvakalelo yokuzola nokuba separadesi. Yahlulwe ibe yi-semi-blackout ileli tape i-shangri-la yelaphu eliyimfama kunye nelaphu elimnyama elimnyama lelaphu le-shangri-la eliyimfama.
Izinto zeLadder tape shangri-la laphu eliyimfama yi-100% yepolyester. Sinikezela ngeesampulu zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngokuthe ngqo phambi komyalelo. Ngaphezu koko, amalaphu ethu anombala otyebileyo kwaye alandela indlela yefashoni yehlabathi.
Uyilo lwangoku lweVerman Blinds Fabric 100% Polyester
Ilaphu elingaboniyo leVerman luyilo olutsha oludibanisa isikrini selaphu, isikrini sefestile kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yomthunzi kunye nokuhlobisa umkhusane. Kwaye isetyenziswa kakhulu kwiiofisi, amakhaya, iihotele, iifektri kunye nezinye izihlandlo. Ilaphu elingaboniyo leGroupeve Verman linokukuzisela imvakalelo yokusondela ngokungenasiphelo kwindalo, uphumle kwaye wonwabile, unokukuzisela imvakalelo yokuzola nokuba separadesi. Inokohlulwa ibe ilaphu le-semi-blackout le-verman blinds kunye nelaphu elimnyama elimnyama.
Izinto eziphathekayo ze-verman blinds fabric yi-100% ye-polyester. Sinikezela ngeesampulu zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngokuthe ngqo phambi komyalelo. Ngaphezu koko, amalaphu ethu anombala otyebileyo kwaye alandela indlela yefashoni yehlabathi.
Uyilo olutsha I-Elegant Silhouette Blinds Fabric 100% Blackout
Ilaphu elingaboniyo le-Silhouette luyilo olutsha oludibanisa isikrini selaphu, isikrini sefestile kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yomthunzi kunye nokuhlobisa umkhusane.
Ukugcinwa kunye nokucocwa kwamalaphu e-Groupeve zebra blinds kunje kungezantsi:
1. Ukucocwa kwe-Ultrasonic kwenza ilaphu liqaqambe njengento entsha.
2. Ukufunxa ivacuum kunye nokususwa kothuli.
3. Ukucoca ukucoca kukuphumeza ukucoca okunzulu, nceda usebenzise isicoci se-vacuum ngentloko ye-brush ukuze ucoce ngobumnene. Ungasebenzisa kwakhona isomisi seenwele (esingamiselwanga ukushisa) ukuvuthela uthuli kwi-decoration yefestile.
Ilaphu lethu elimfamekisayo le-silhouette lolona khetho lufanelekileyo kwiifektri ezimfama okanye kubathengisi bevenkile. Sinokunikezela ngeesampulu zasimahla zelaphu le-silhouette blinds kubathengi bethu. Kwaye umqulu ngamnye welaphu le-rainbow blinds kufuneka uphumelele uvavanyo lomgangatho ngaphambi kokuthunyelwa.
Uyilo olutsha ileli yeLali yeTape Shangri-La Blinds Fabric Blackout
Ilaphu le-Ladder tape i-shangri-la blinds fabric yimveliso ephuculweyo yelaphu elingaboniyo le-Shangri-La, lukhetho lokugcina ubumfihlo kunye nokulawula ukukhanya. Ilaphu le-groupeve ladder tape shangri-la blind blind inokukuzisela imvakalelo yokusondela ngokungenasiphelo kwindalo, uphumle kwaye wonwabile, inokukuzisela imvakalelo yokuzola nokuba separadesi. Lolona khetho lufanelekileyo kwiprojekthi yakho yeemfama zasekhaya. Ilaphu lisebenzisa iintambo ezikhethekileyo kwaye lifumana unyango lokumisela ubushushu obuphezulu, oluhlala luhleli kwaye alusuki.
Ubude be-roll obuyi-30m, kwaye ukupakishwa ngumbhobho wephepha oqinileyo ngomqulu. Sinikezela ngeesampulu zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngokuthe ngqo phambi komyalelo. Ngaphezu koko, amalaphu ethu anombala otyebileyo kwaye alandela indlela yefashoni yehlabathi.
Ilaphu leVerman blinds yimveliso ephuculweyo yelaphu elingaboniyo le-Shangri-La, luyilo olutsha oludibanisa isikrini selaphu, isikrini sefestile kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yomthunzi kunye nokuhlobisa umkhusane. Kwaye isetyenziswa kakhulu kwiiofisi, amakhaya, iihotele, iifektri kunye nezinye izihlandlo. Kukukhetha ukugcina ubumfihlo kunye nokulawula ukukhanya.
Izinto eziphathekayo ze-verman blinds fabric yi-100% ye-polyester. Ubude be-roll obuyi-30m, kwaye ukupakishwa ngumbhobho wephepha oqinileyo ngomqulu. Sinikezela ngeesampulu zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngokuthe ngqo phambi komyalelo. Ngaphezu koko, amalaphu ethu anombala otyebileyo kwaye alandela indlela yefashoni yehlabathi.
Umgangatho oPhezulu weLadder Tape Shangri-La Blinds Fabric 100% Polyester
Ilaphu le-Ladder tape i-shangri-la blinds lilaphu luyilo olutsha kraca oludibanisa ilaphu, iscreen sefestile kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yomthunzi kunye nokuhlobisa umkhusane. Kwaye isetyenziswa kakhulu kwiiofisi, amakhaya, iihotele, iifektri kunye nezinye izihlandlo. Kukukhetha ukugcina ubumfihlo kunye nokulawula ukukhanya. Xa imfama ivuliwe, indawo ekhangayo inokubonwa ngezikrini, xa imfama ivaliwe, unokuqinisekisa ubumfihlo bomntu.
Ilaphu lisebenzisa iintambo ezikhethekileyo kwaye lifumana unyango lokumisela ubushushu obuphezulu, oluhlala luhleli kwaye alusuki. Kwaye imathiriyeli ileli tape shangri-la blinds ilaphu 100% polyester. Sinikezela ngeesampulu zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngokuthe ngqo phambi komyalelo. Ngaphezu koko, amalaphu ethu anombala otyebileyo kwaye alandela indlela yefashoni yehlabathi.
2020 Isimbo esitsha soMaleko oNtathu lwelaphu iSemi-Blackout
Amalaphu e-groupeve triple layers akhethekile ekuthungeni kwaye mahle ngenkangeleko. Ukudibanisa amalaphu anqamlezileyo phakathi kwamanqwanqwa amabini amalaphu amhlophe anokugcina igumbi lithambile. Jika i-blade ukulungisa ubunzulu bokukhanya. Indwangu ekhethekileyo yokuthungwa inokugcina umbala uhambelana ixesha elide. Umthunzi oqinileyo. Ukucocwa kwe-ultrasonic yeendwangu kungasetyenziselwa ukwenza iingubo zibukeke ziqaqambile njengentsha.
Ngokweempawu zelaphu lelaphu eliphindwe kathathu, linokohlulwa libe lilaphu elimnyama elinesiqingatha esimnyama kunye nelaphu lelaphu elimnyama elimnyama. Izinto zelaphu le-triple layer yi-100% ye-polyester. I-Groupeve ineminyaka engaphezulu kwe-16 yamava okwenza ilaphu elihle neliphezulu lelaphu lelaphu.
IFashoni eyenzelwe wena iShangri-La Blind Fabric Semi-Blackout
I-Shangri-La blinds luyilo olutsha kraca oludibanisa iikhethini zombane, izikrini zefestile, iimfama zevenethi kunye nee-roller blinds. I-Shangri-La blinds kwimarike kufuneka ithelekise iimpawu ezimbini ezinzima: ukucaca kunye nokukhululeka. Ukucaca kubonakaliswe ubukhulu becala, ukwakheka kunye nempahla yomsonto kwi-mesh part. Xa i-Shangri-La i-high-clarity blind ivuliwe, ukukhanya okungena kwigumbi kuninzi kwaye kuthambile; xa ivaliwe, inokufihla ubumfihlo kakuhle. Iqondo lemiphetho ekhululekileyo libonakaliswa ikakhulu kwiqondo lepolymerization yemesh kunye nenxalenye eqinileyo yomsonto.
Ilaphu le-Groeveve shangri-La blinds elikumgangatho ophezulu linokumelana nokutsala amandla amakhulu, kwaye aliyi kuvelisa iibhula ezinzima ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla. Isishwankathelo, xa ukhetha ilaphu, nceda ubeke ingqalelo kumgangatho, kuphela emva koko unokukhetha ilaphu le-shangri-la blinds eyanelisayo, ekhululekile, kwaye ethembekileyo.